UJennifer Lopez uthembisa umshado wakhe, uCarla Bruni ukhokha uGianni Versace: konke - I-Tepe RELAY
Accueil » ABANTU & LIFESTYLE UJennifer Lopez ukhuluma ngokubandakanyeka kwakhe, uCarla Bruni ukhokha inkokhiso kuGianni Versace:
UJennifer Lopez ukhuluma ngokubandakanyeka kwakhe, uCarla Bruni ukhokha inkokhiso kuGianni Versace:
Njalo esithombeni se-movie Queens, UJennifer Lopez wenze ingxoxo noCloser. Umlingisi nomculi we50 ans bakhulume ngendima yakhe njengomdwebi esikrinini, kodwa futhi ikakhulukazi romance yakhe no-Alex Rodriguez. Umdunuzi omuhle owabelana ngempilo yalowo owayengumdlali we-baseball wembula ukuthi wayen "ukwethuka kwangempela"Lapho lowo wezemidlalo eseyicelile. "Bengingalindele ukuthi lolo suku luhlangane futhi kufanele ngithi ngasithola isicelo sakhe sithandana ngokweqile", Utshele intatheli yethu yaseHollywood.
Olunye ulwazi lolo suku UCarla Bruni, okhokha inkokhiso yethenda kuGianni Verace, ushone ngoJulayi 15 1997. Emhlanganweni wokuzalwa kwalowo owayengumklami wase-Italy, uCarla Bruni uthathe isinqumo sokukhokha intela ku-Instagram ngoMsombuluko 2 Disemba. "Phakade enhliziyweni yami", Ubhala unkosikazi kaNicolas Sarkozy ngemizwa, ngaphambi kokufisa"usuku lokuzalwa oluhle"Kulowo omaka umhlaba wezemfashini ngesikhathi sokuphila kwakhe. Eposini lakhe, inkanyezi ihlanganyela ngesikhumbuzo sombukiso wemfashini waseVersace, azibambe iqhaza eminyakeni eminingi edlule nesithombe sakudala esimnyama esimhlophe naye stylist eshonile eminyakeni engu-50, ebulewe ngumbulali waseMelika u-Andrew Cunanan.
Futhi uma kungenjalo, kuzo zonke izindaba ...
UKim Kardashian wenza omunye umsindo ngezambulo zomagazini i-NW. Ngokusho kozakwethu, Unkosikazi ka-Kanye West ubengakhipha isizumbulu semali edonsa isigidi sama-1,35 (cishe ama-euro ayizigidi ezingama-1,2) athola isikhangiso senguqulo yase-Australia ye-Uber Eat. Eva Longoria Ngokwakhe futhi ngokwemininingwane yeLanga, uzoba unkulunkulukazi kaHarperoyindodakazi kaVictoria Beckham. Ekugcineni, Lara Fabian kwabelwane nge-akhawunti yakhe ye-Instagram a isithombe sakhe nendodakazi yakhe uLou. Lo mculi usebenzise leli thuba lakhe ngeSonto 1er Disemba ukuchitha isikhathi nomndeni futhi avume ukwakhiwa yintsha yakhe.
Lesi sihloko sivele kuqala https://www.closermag.fr/people/jennifer-lopez-se-confie-sur-ses-fiancailles-carla-bruni-rend-hommage-a-gianni-v-1055621
UPrince William ukhipha isibuyekezo esiduduzayo se-Instagram ngokukhanya okungajwayelekile kuRoyal Tour
Izinkinga zasebukhosini zePrince Andrew zabizwa ngokuthi "ukuzenzisa kuwo wonke amazinga"
Inkanyezi eyamangazayo enqabile ukungabandakanyi ekwenzeni umshado wePrincess Beatrice